အောက်တိုဘာလ 2014 |4၏စာမျက်နှာ 19 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 4)
CueScript အဆိုပါ 2014 CAPER Show ကိုမှ၎င်း၏ချက်ချင်း Solutions များရရှိစေ
အဆိုပါ FDM အသံလွှင့် Booth Buenos Aires, Argentina မှာ Display ကိုအပေါ်ဖြစ် Solutions ချက်ချင်း၏ CSM လိုင်း - CueScript, ရှိသမျှထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် Feature-rich ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူဖန်တီးမှုချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသူ, မတက်ရောက်ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ 2014 CAPER Show ကိုအောက်တိုဘာ 29 မှစ. , Centro ကော့စ Salguero မှာအရပျကိုယူပြီး - ...
Snell လုပ်ငန်းအသွားအလာ Automation နှင့်အတူ Vidchecker အော်တို QC ပေါင်းစည်း
Vidcheck, automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ဖိုင်-based မီဒီယာများ၏ automated ဆုံးမခြင်းများအတွက်လူတန်းစား-ဦးဆောင်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ယင်း၏ '' Vidchecker '' automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (အော်တို QC) နည်းပညာ '' အရှိန်အဟုန် '' နှင့်အတူပေါင်းစည်းခဲ့ပြီးသောအဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်ကြေညာလိုက်ပါတယ် Snell တစ် Quantel ကုမ္ပဏီထံမှမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်သယံဇာတစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစနစ်။ တစ်ခု ပို. ပို. ကွဲပြားခြားနားစစ်ခင်းကျင်းပေးပို့များအတွက်အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ခြင်း ...
CCW မှာ DigitalGlue:
CCW မှာ၎င်း၏တဲထဲမှာအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာ့ဖလား (CCW) ကို Preview DigitalGlue Booth 737, DigitalGlue ချောမွေ့စွာ HD ကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲအတွက်၎င်း၏ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမိတ်ဖက်အတော်ကြာ၏နည်းပညာများ routing ကိုအကောင်းဆုံး-In-ဖောက် signal ကိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သဟဇာတ, Barnfind Technologies က, တံတား Technologies က, VideoFlow နှင့် TAG VS ထံမှဖြေရှင်းချက်ဖိုင်တိုက်ရိုက်စစ်ဆင်ရေးပြသနိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းထိန်သိမ်းအတွက်တင်ပြပါလိမ့်မည် ...
Suzanne Lezotte စျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာအဖြစ် SIM ကဒ် Group မှပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝါရင့် SIM ကဒ်ဒစ်ဂျစ်တယ်, PS ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ, Bling ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Chainsaw များအတွက်စျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ Los Angeles-အဆိုပါ SIM ကဒ် Group မှယနေ့စျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာအဖြစ် Suzanne Lezotte ၏ရက်ချိန်းကြေငြာလိုက်သည်။ ဒီအနေအထားမှာတော့ Lezotte SIM ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်, PS ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ, Bling ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ပါဝင်သည်သောကုမ္ပဏီ၏သင်းဖွဲ့, တစ််စျေးကွက်ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ် ...
JVC: အရှေ့တန်းမှတွင် 4K HD ကိုနေအိမ်ပြဇာတ်ရုံရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူ
4K HD ကိုရုပ်မြင်သံကြား၏ထွန်းလျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်များသို့တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးနှင့်အတူ, ငါကအကြောင်းနည်းနည်းစကားပြောနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အားကစားစောင့်ကြည့်၏ဤနည်းလမ်းသစ်အပေါ်တဦးတည်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ယူဆှေးနှေးဖို့လိုနှင့်မည်သို့ high-definition ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား-စောင့်ကြည့်အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေမယ့် ။ ၏လုပ်ငန်းခွဲအဖြစ်ယိုကိုဟားမား, ဂျပန်အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ပြီးနောက် ... 4K HD နဲ့ JVC စကားပြောရန်ကြစို့ ...
Telestream ScreenFlow 5.0 မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်တည်းဖြတ် Software ကိုမိတ်ဆက်
Telestream®သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီးယနေ့တွင် Mac အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ချီးမြှင့်ဆုံးသောစကရင်ရုပ်သံနှင့်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သော ScreenFlow 5.0 ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုဖြင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူများမဟုတ်သည့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ၏မျိုးဆက်သစ်တွင် ScreenFlow 5.0 သည် iOS ထုတ်ကုန်များမှတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊ မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ...
အရောင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်ဘရာဇီး, ချိန်းဆို Hubert Legrix de la Salle မှ Broadpeak Expand နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး
RENNES, ပြင်သစ် - အောက်တိုဘာ 27, 2014 - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Broadpeak, content တွေကိုဖြန့်ဝေကွန်ရက် (CDN) နည်းပညာများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူအသက်ရှင်နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးများအတွက်ဗီဒီယို On-demand (VOD) ဆာဗာများ, IPTV, OTT, ဟိုက်ဘရစ်တီဗီ, နှင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ, ယနေ့ကကုမ္ပဏီရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းရှိနေခြင်းတိုးမြှင့်, ဘရာဇီး၏အရောင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် Hubert Legrix de la Salle အဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူကြောင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ ဆောပိုလို, Hubert အခြေစိုက် ...
Deutsche ကောင်းစွာ RTW TouchMonitor Range အပေါ်တောင်းဆို
ထုတ်လွှင့်ဘာလင်နှင့် Bonn ထုတ်လုပ်မှုဆိုဒ်များ Cologne, ဂျာမနီ, အောကျတိုဘာ 3,7မှာ EBU-R9-ကိုက်ညီအစီအစဉ် Levels နဲ့အာမခံဖို့ RTW TM128, TM27 နှင့် TM2014 ယူနစ်ရွေးချယ် - ဘယ်အချိန်မှာ Deutsche ကောင်းစွာ, ဂျာမနီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတကာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဂျာမန်၏က ARD ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အများပြည်သူထုတ်လွှင့်ခြင်း, EBU-R128 အသံကျယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ၎င်း၏ programming ကိုလိုက်နာစေရန်ရှာက, RTW မှလှည် ့. ...
4 ၏စာမျက်နှာ 19«ပထမဦးစွာ...«23456 » 10...နောက်ဆုံး»